पशुपतिको पक्षमा रंगियो सामाजिक सञ्जालः लालमण्डले जागेको बेला, कति छिट्टै पञ्चायत फर्केछ ! | Ratopati
मङ्गलबार ७ जेठ, २०७६ Tuesday, 21 May, 2019
पशुपतिको पक्षमा रंगियो सामाजिक सञ्जालः लालमण्डले जागेको बेला, कति छिट्टै पञ्चायत फर्केछ !
personरातोपाटी संवाददाता exploreकाठमाडौं access_timeफागुन ५, २०७५ chat_bubble_outline0
गायक पशुपति शर्माको ‘लुट्न सके लुट’ बोलको गीत युट्युबबाट हटे पनि यसको चर्चा अझै कायम छ ।
सरकार र सत्तामा व्याप्त बेथिति प्रति आलोचना गरिएको गीतमा प्रयोग भएका शब्द प्रति सत्तारुढ नेकपा निकट युवा संघ नेपाल लगायत पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले गीतको आलोचना गरेपछि गायक शर्माले शनिबार राती स्पष्टिकरण लेख्दै गीत युट्युबबाट हटाएका थिए ।
शर्माले गीत हटाएपछि सामाजिक सञ्जाल यतिबेला उनको पक्षमा रंगिएको छ । धेरैले दुई तिहाईको शक्तिशाली सरकार एउटा गीतबाट आत्तिएको भन्दै व्यङ्ग्य गरेका छन् भने गीतलाई हटाउन बाध्य पारिनु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार भनेर अथ्र्याएका छन् ।
हेरौँ सामाजिक सञ्जालमा भेटिएका केही प्रतिक्रियाहरु :
यथार्थ पो लेख्न नपाउने होला । विकृति र विसंगतिको गीत पो गाउन नपाउने होला ! चिन्ता किन प्रिय स्रष्टाहरू ? भजन गाउन हामीलाई कसले रोक्छ ? लालिगुराँस, हिमाल र रून्चे पिरिमको गीत, कविता लेख्न र गाउन हामीलाई कौना माइका लालले रोक्छ ? यति भन्दै मेरो दुई शब्द यहीँ टुंग्याउँछु ।
किन रिसाएको ख्वामित ? यमराजको शासन भन्यो भनेर कि डेढ अर्बको हेलिकप्टर भनेर ? सके लुट रोक, नसके युट्युव छोप ।
पशुपति शर्मा ज्यू, तपाईं गाउँदै गर्नु ! हामी सुन्दै गर्छौं । जो सुकै नेतृत्व भए पनि राज्यलाई औँलो ढड्याई राख्नु नागरिकको संवैधानिक अधिकार र जिम्मेवारी नै हो । नत्र के–को लागि गणतन्त्र ल्याउन यत्रो बलिदान दिनु नि ? हामी तपाईँका साथमा छौँ !
हिजो शाही सेनाले – तिमी गीत गाउन त गाउ तर जनताको गीत नगाउ भन्दा जनताको गीत गाउँदै बलिदान दिने कृष्ण सेन ‘इच्छुक’ का पार्टीका साथीहरु सत्तामा पुगेपछि पशुपति शर्मालाई पनि गीत गाउन त गाउ तर ‘लुट्न सके लुट’ भन्ने गीत चै नगाउ भन्न थालेछन् ।
पशुपति शर्माको गीत ‘लुट्न सके लुट’ युट्युबबाट हटाउन सरकारी मान्छेले दबाब र धम्की दिएको बुझियो । यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी भिजिलान्ते संस्कृतिको प्रतिरोध गरौँ ।
सरकारको चिन्ता मौलिक छ । रू ७८ लाखका पाठकलाई कसरी उन्मुक्तिदिने, यो प्यूसो पशुपतिलाई कतिसम्म दंग्याउने ? हामी मानिस हौं कि जन्तु हौँ ? यसको निक्र्यौल गर्नु अब जरूरी भो ।
उफ अरिंगाल मात्रै हैन, यो समय हो –लालमण्डलेहरू जागेको बेला । हे ज्ञानीजन – के तिमीहरूले मण्डले बिगबिगी देख्यौ ? भोग्यौ ? जस्ले पञ्चायतको चिहान खनेका थिए ।
कति छिटै पञ्चायत फर्केछ । लोकतन्त्रमा सिर्जनाका लागि पनि डराउने दिन आए । पशुपति शर्माको लुट्न सके लुट् कान्छा अहिलेको समयको बोल हो । अनि नागरिक चेतनाको अभिव्यक्ति पनि हो ।
पशुपतिनाथले केही भन्दैनन्, त्यसैले किन डराउन आवश्यक परो तर पशुपति शर्माले गोप्य कुरा सबै सार्वजनिक गरेकोले डराएछन् ।
पशुपति शर्माको एउटा गीतबाटै दुई तिहाई त्राही त्राही भएको हो र ?
पशुपति शर्मालाई चिल्न नेकपाका ‘युवा’ नामका अरिंगाल भुन्भुनाउँदैछन् । उमेर युवा भएर के गर्नु विवेक भुत्ते भएपछि ।
पंचायतः जीवन शर्मा जनताका गायक थे, ओली लुकीलुकी तिनका गीत सुन्थे, सङ्कटकालः प्रचण्डहरू लुकीलुकी जनताका गायक प्रदीप देवानहरूका गीत सुन्थे, सरकार गीतदेखि आँत्तिन्थ्यो, आजः प्रचण्ड–ओली सरकारमा छन्, सरकार गीतदेखि उसरी नै आत्तिन्छ ! जनता लुकीलुकी पशुपति शर्माका गीत सुन्छ !
कन्टेनरको डिब्बामा सात किलो सुन लुकाएर ल्याउनेविरुद्ध अदालतमा मुद्दा
ज्वाइँ झुण्डिएको स्थान नजिकै भेटियो रगत लतपतिएको खुकुरी
आत्महत्या गर्ने ज्वाइँ नै थिए त ती नकाबधारी ?
संविधान संशोधनबारे राजापाले माग्यो सरकारको स्पष्ट धारणा
भ्रष्टाचार प्रमाणित भए झुण्डिएर मर्न तयार छु : कुलमान घिसिङ
सामूहिक हत्या प्रकरण : आत्महत्या गरेका मानबहादुरको श्रीमतीसँग खटपट !
भोजपुरमा प्रहरी र विप्लव समूहका कार्यकर्ताबीच गोली हानाहान
शिशुको मृत्यु भएपछि मेडिकल सञ्चालक पक्राउ
१८ घण्टापछि उठाइयो शव, यस्तो अवस्थामा भेटिएका थिए मानबहादुर (तस्बिरसहित)
प्रदेश नम्बर २: राजधानीमा सहमति, प्रदेश नामाकरणमा विवाद
ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई बी एण्ड सी मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटलमा ५० प्रतिशत सम्मको छुट
चेक बाउन्स मुद्दामा मोडल खुश्बु ओलीलाई यस्तो फैसला
सरिता हत्या प्रकरण: परिवारका सबैलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दा
रुपन्देहीमा एक युवकको हत्या, ४ जना नियन्त्रणमा